Waini 2.0: iyo nyowani vhezheni yeWindows inoenderana dura reUnix | Linux Vakapindwa muropa
Waini, chirongwa chakakurumbira icho chinopa kuwiriranisa dura (sezvo isiri emulator sekufunga kwevamwe ...) kukwanisa kuisa yemuno Microsoft Windows software pane masisitimu akadai UnixSaLinux, inouya nekumwe kugadzirisa. Vagadziri vakakwanisa kuburitsa vhezheni yacho Waini 2.0 kune avo vese vanoda kana kuvimba nezvirongwa nemitambo yemavhidhiyo kubva paRedmond chikuva.
Pakati pekuvandudza kwakawanda kunosanganisirwa neWine 2.0, pamwe kuitiswa kwekutsigirwa kweMicrosoft kunoonekera. Office 2013. Iyo inozivikanwa Microsoft hofisi suite ikozvino inogona kuiswa nekuda kweWine mune iyi vhezheni. Kunyangwe vhezheni dzapashure hadzitsigirwi, asi idanho rakakura, kunyanya tichifunga kuti iyo suite ndeimwe yemasimba ekambani yeWindows uye kuti kunyangwe paine dzimwe nzira dzakadai seLibrOffice, Calligra, nezvimwe, Ivo vachiri kuda imwe nhanho yekukwikwidza kubva kwauri kuenda kwauri.
Asi ivo vanogadzira havana kungo tarisa pane izvo chete, ivo vakagadziridzawo zvakasara zvegadziriro yekuvandudza kuenderana uye kushanda kweiyi software. Dzimwe shanduko dzinogona kuwanikwa mune zvinyorwa uye mafonti akapihwa, girafu, odhiyo, mushandisi interface, kubatana uye kushandurira mumitauro yakasiyana. Semuenzaniso, tsigiro ye DirectX 3D yakagadziridzwa, pamwe neDirectDraw, D3DX, nezvimwewo, saka rutsigiro rwemitambo yemavhidhiyo zvakare iri nani, ichikupa kuwedzera mune zvevaraidzo pasi peiyo penguin chikuva.
Uyewo vakavandudza HiDPI inoratidzira kuyera, rutsigiro rweGStreamer 1.0, Gecko inogadziridza, 64-bit rutsigiro rweMono, new driver driver for peripherals inotungamirirwa ne libudev, nezvimwe. Uye hatifanirwe kukanganwa kuti vakagadzirisa zvimwe zvipembenene kubva mushanduro dzakapfuura uye kana uchifarira kudzidza zvakawanda nezveWine 2.0, ndinokurudzira kuti uende ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti, kwaunogona kurodha pasi iyi yazvino vhezheni yakagadzika.
Paunenge uchinge waodhaunirodha, tevedzera iyi dzidziso kuisa uye gadzira Waini paPC yako
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Waini 2.0: iyo nyowani vhezheni yeWindows inoenderana dura reUnix